Nezvedu - Anping Hanke Filter Technology Co., Ltd.
Anping Hanke Filter Technology Co., Ltd inosimbiswa muna 2005 muAnping, China. Isu tiri vagadziri veplated firita, sintered firita, firita disc, chubhu firita, slot firita, tswanda Sefa nezvimwewo firita zvigadzirwa uye yakarukwa waya pajira riya.
Isu takabvumidza ISO9001 muna 2013. TINOSANGANISA zvakagadzirwa zvekugadzira uye zvekuyedza michina, yekugadzira tekinoroji kubva kunze kwenyika, uye inotora izwi-kirasi mhando firita zvinhu senge hombe firita yezvinhu, ichishandiswa mukugadzirwa kwemasango sintered simbi senge huru firita zvinhu uye sefa chinhu. Kunze kwehunhu hwakanaka, isu tinopa technical technical, yakavimbika filtration mhinduro uye kugutsikana sevhisi. Isu tinobatsira kugadzirwa kwevashandisi kuve kwakanyanya kushanda.
With ruzivo anopfuura makumi maviri emakore uye budiriro, isu takasarudzika mukugadzirwa, kutsvagisa & kusimudzira uye kugadzirwa kwesimbi firita. Mune iyo firita ye petro-kemikari, polymer, mafuta kusefa, gasi kurapwa, kurapwa kwemvura, chikafu maindasitiri, nezvimwe, Hanke rave rinotungamira maraki. Iye zvino tave nevatengi pasirese, senge United States, South Korea, Canada, Australia, France, Germany, Finland, Italy, Brazil, Japan, Taiwan, etc. Vazhinji veavo vane mukurumbira uye vanoitisa mhando muindasitiri yavo.
Pasi pekupedza zvinotyisa uye nyowani hupfumi modhi, isu tinoedza kutsvaga nzira nyowani yebasa revatengi uye kuyedza kuve imwe firita kambani. Ipapo isu tine yedu yechiratidzo. Basa redu ndere kuita kuti vashandisi vedu vagadzire vabudirire uye vashambidze nekushandisa mafirita edu. Kugadzira nharaunda yakachena uye kuita kuti vanhu vave nehutano zvakanyanya.
Gamuchirai vese vatengi vekare uye vatsva kuti mutaure nesu uye mushanyire fekitori yedu. Sefa yeHanke inogona kuve yakagadzirirwa sezvaunoda. Isu takagadzirira kushandira pamwe newe neepamusoro mafirita emhando yepamusoro uye nekukurumidza nyore basa.
Yakakurumbira yekutsvaga & Yekusimudzira timu;
Yepamberi dhizaini mazano;
Ruzivo rwemakore makumi maviri;
Yakagadziriswa zvigadzirwa zvekugadzira;
Inobudirira mhando manejimendi;
Yakasarudzika zvigadzirwa uye sevhisi;
Yakavimbika filtration mhinduro;
Kurumidza kuendesa sevhisi;
Zvimwe zvekuchengetedza mutengo;
Pleated firita, sintered firita chinhu, firita disc uye akasiyana mafirita zvinhu uye waya pajira riya. Mashoko acho anosanganisira Stainless simbi, duplex SS, Chirairo Duplex SS, monel, inconel, nickel, hastelloy etc.
Petro-kemikari, Polymer, Catalytic filtration, mafuta kusefa, oiri yekumanikidza yekugadzira mutsara uye kucheka mafuta kusefa uye homogenization; Kurapa gasi; kurapwa kwemvura; mishonga maindasitiri, maindasitiri ezvikafu; maindasitiri murazvo kudzivirira, nezvimwe.